Torolalana mitondra baolina
Mitondra karazana hafa
MANAO PRODUKY MAHARITRA AZY
Fanamarihana fialantsasatra amin'ny fetin'ny asa
Ry mpanjifa sarobidy rehetra: hiala sasatra amin'ny fialantsasatra amin'ny 1 Mey ka hatramin'ny 5 Mey izahay, mety hisy valiny tara mandritra ity fotoana ity noho ny famerana ny fahazoana mailaka, Miala tsiny indrindra izahay amin'ny fanelingelenana ateraky ny fialantsasatra. Azafady mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny wechat na whatsapp tsy misy fisalasalana raha mila izany ianao, I ...
Fironana lehibe amin'ny Indostrian'ny Bearing Global
Ny bearings dia singa manan-danja amin'ny milina rehetra. Tsy mampihena ny disadisa fotsiny izy ireo fa manohana ny enta-mavesatra koa, mampita hery ary mitazona ny fampifanarahana ary manamora ny fampandehanana fitaovana mahomby. Ny tsenan'ny Global Bearing dia manodidina ny $ 40 Miliara ary antenaina hahatratra $ 53 Miliara amin'ny 2026 miaraka amin'ny ...
17th, Feb 2021 Manomboka ny fampandrenesana miasa
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-02-18
Ry namana malala, satria nandalo fialantsasatra lava be izahay tamin'ny 1, feb ka hatramin'ny 17 feb, noho ny fialantsasatra tamin'ny Fetin'ny Lohataona Sinoa. Vitanay izao ny fialantsasatra ary nanombohana ny asanay tamin'ny faha-17 feb 2020. Tonga soa ireo namana manerantany ary miaraha-mifampiraharaha aminay. Hizaha toetra ny kalitao tsara indrindra izahay ...
Ahoana ny fitsapana ny kalitaon'ny solika?
Ny firenena sasany dia tena sarotra ny mitsapa ny kalitaon'ny menaka amin'ny alàlan'ny fitaovana, maka fomba mora izahay hizahana ny kalitaon'ny menaka, hampahafantarinay anao ny momba ny kalitaon'ny diloilo. Androany izahay dia mandray ilay horonantsary momba ny fanandramana kalitao menaka, azonao atao ny manamarina ny kalitaon'ny vokatrao ary mampitaha anay! Ny tena tsara ...
Fitaovana sakana ondana
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-25
Ny mpanamboatra matihanina eto an-toerana Pillow Block Bearing dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona.
Multipurpose Lithium Base Grease Drop Point mihoatra ny 180 ℃ 180kg Drum
Felicia dia mampiditra ny vokatra.
MULTIPURPose LithIUM BASE GREASE NLGI3 mp3 DROP POINT Mihoatra ny 180 ℃ MULTIPURPose CALCIUM BASE GREASE NLGI3 mp3 DROP POINT 100 ℃ BLUE HIGH TEMPERATURE GREASE (HP) DROP POINT Mihoatra ny 290 ℃ Manohy mampiasa 80,000km ~ 100,000km
Ireo entana dia nalefa tamin'izao tontolo izao.
Kaontenera 1 * 40ft + entana 1 * 20ft no nalefa vao tsy ela akory izay. Ny kalitao dia nahafa-po ny mpanjifa. Matokia anay, miara-miasa aminay, tsy maintsy mendrika izany.